घर युरोपियन स्टार Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीजको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम उपनाम हो। 'डेलस्ट्रोयर'। हाम्रो डील एली बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तपाईले तपाईंको बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। निस्सन्देह, नाइजीरियाले जन्मिने अंग्रेजी फुटबलर यस समयमा संसारमा प्रतिभाशाली युवा फुटबलरहरू मध्ये एक हो। हामी Dele Alli स्टोरी पेश गर्दछौं। एक कठिन upbringing कसरी एक प्रीमियर लीग सुपरस्टार को वृद्धि को प्रेरित को एक कहानी। थप adieu बिना, सुरु गर्न।
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक बचपन जीवन
बामेडले जर्मिन अली को माल्टन केन्स, बकिंघमशायरमा अप्रिल 11 मा, नाइजीरियाका पितासँग 1996, श्री केइन्दे केनी एली (बिजनेस म्यान) र ब्रिटिश आमा डेनिज अली (हाउस पत्नी) मा जन्मिएको थियो। फुटबलको लागि उनको प्रेम चाँडै हिँड्न थाल्यो (उमेर 1)।
लगातार विवाह सम्बन्धी समस्याहरूको कारणले गर्दा एलीको आमाबाबुले आफ्नो छोराको प्रतिभामा धेरै चासो लिन सक्थे। उनीहरूको विवाहमा अस्थिरता एक समय मा तलाक हुन थाल्यो डील सिर्फ3वर्षको थियो। उनको पिता केनीले आफ्नो विवाह को एक हप्ता भित्र 1996 मा विभाजित गर्यो। बेलायती तलाकका कानुन अनुसार, डेनिसलाई उनको छोरा संग पूर्ण अधिकार दिइएको थियो। श्री केहेन्ड केनी एली को उनको छोरा डील को देखने को लागि कहिलेकाही दौरे को अनुमति दिइएको थियो।
उनको तलाक पछि, डील मिल्टन केनेमिम, यूनाइटेड किंगडम मा आफ्नो आमा संग रह्यो, जबकि उनको पिता नाइजीरिया मा स्थानांतरित गर्न को लागि उनको बहु मिलियन नायर व्यापार को सामना गर्न को रूप मा उनको यूनाइटेड किंगडम मा स्थापित हुनुभयो। डेभको फुटबल सपनाहरूको अस्थायी रूपमा उनको आमाबाबुको विभाजनको नेतृत्व भयो। उनले कहिलेकाहीँ फुटबल खेल्न सक्थे र उनको साथीले उनलाई कुनै पनि युवा अकादमीमा नामाकरण गर्न मौका पाए।
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -नाइजीरिया को उनको पहिलो भ्रमण
नाइजीरियामा हुँदा उनको बुबाको निरन्तर संचारले अझै पनि पिता / छोराको सम्बन्ध बलियो बनायो। आठ वर्षको उमेरमा यिनले पहिलो पल्ट नाइजीरिया भ्रमण गर्न आफ्नो मन बनाए। उनको पिताले तिनलाई युकूरु संस्कृति सिकाउनुभयो र उनको परम्परागत लुगा लगाउनको महत्त्व बुझ्नुभयो।
चाँडै, जवान डीललाई एहसास भयो कि उनी नाइजीरियाको योरूवा जनजातिमा एक लोकप्रिय क्याननको राजकुमार थिए। आदर्श रूप मा, उनको पिता राजा को एक पुत्र थिए। लागोसमा हुँदा, डीलले भेट्टाए र आफ्ना विस्तारित परिवारका सदस्यहरूसँग मित्र बनाए।
Lagos मा हुँदा, उनले £ £ 20,000-a-year अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयमा भाग लिइन्। नाइजेरियामा, वास्तवमा डीललाई ध्यान दिंदा सबै नाइजीरिया धेरै मित्रवत थिए, मेहमानप्रसाद र उहाँका लागि खुला। उहाँ जन्मेको हुँदा उहाँले धेरै खुशी महसुस गर्नुभएन।
नाइजीरियाको तिनको निवास तथापि संयुक्त राज्यमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने आफ्नो बुबाको निर्णयले छोटो छोटो थियो। उनीहरूले त्यहाँ त्यहाँ स्थानान्तरण गर्नैपर्छ।
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - उहाँका पिताले कसरी मुद्दा सुरु गर्नुभयो
डील नाइजीरिया मा रहन लगभग एक वर्ष पहिले फेरि ह्यूस्टन, टेक्सास मा आफ्नो पिता केहिन्दी संग एक हवेली मा जाँदै थिए। आफ्नो जीवनमा केहि बिंदु मा, डील असुविधाजनक भयो उनको पिताले कसैलाई विवाहित विवाह गर्ने निर्णय गरे कि उनले आफूले उनको कदम माने आमाको लागि पर्याप्त मन परेनन्। तपाईंले लागु लाग्नु भएको अदालतको विवाहमा भाग लिनुभयो।
त्यस घटना पछि, तनाव र तिनको पिताको बीच लला नयाँ पत्नीको बारेमा। यसले संयुक्त राज्य छोड्नको बारेमा ताजा विचारहरूलाई प्रोत्साहित गर्यो। उहाँले आफ्नो दिमाग बनाउनुभयो र तिनलाई बुबालाई तिनलाई फिर्ता ल्याउने बेला बेलायतलाई फिर्ता लिन मद्दत गर्न आग्रह गर्नुभयो। फर्काउनको लागि एक आदर्श कारण उनको फुटबल सपनालाई पुनरुत्थान गर्ने थियो जुन उनीहरूले उनको पीडालाई कम गर्न सक्थे।
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बेलायत फर्किदै
यूनाइटेड किंगडममा पुग्दा, पूरा ग्याँसमा आफ्नो माईलाई भेट्न। उनी ड्रग्स र शराबमा उच्च हुन्थे।
यसले उनलाई आमाबाबुको लागि घृणाको सुरुवातलाई चिन्ह लगाइदियो जुन उनले उनीहरूलाई रोल मोडेल मानेनन्। चाँडै, उहाँले एक तरिकालाई जीवन शैली जीवन बिताउन थाल्नुभयो।
Dele को अनुसार; "तपाईंको पक्षले आमाबाबुलाई मात्र, मात्र चियाको समर्थनको लागि सडकमा रहन थाल्नुभयो"।
यो डील एली को मामला थियो। उनी लन्डनका सडकबाट ग्याङ्गोसँग मिलाए। 13 मा, उनको आमाले उनीहरूको आवश्यकताको लागि पछाडि सामाजिक सेवाको पूर्ण अनुमोदन दिए। उनीहरूले एक अचम्मको कुरा गरिसकेपछि उनीहरूको फुटबल सपना देखेर उनीहरूले सडकको खराब प्रभावहरूलाई पछ्याउन नपाउने वचन दिए। उहाँले आफ्नो पहिलो अनुबंध 16 मा हस्ताक्षर गर्नुभयो।
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
फेथर: श्री केहेन्ड केनी अली डेले अलीको दाजु हो। तिनी एक मुकुट राजकुमार, एक लाखपति र लागोस, नाइजीरिया मा एक प्रसिद्ध व्यवसायी व्यक्ति हुन्।
बेलायतीमा आफ्नो खुट्टा टाढ्नुअघि केहिन्दले युनाइटेड किंग्डममा राष्ट्रियकरणको लामो समयको सपना थियो। उनको लागि, यो अर्थ प्राप्त गर्न को लागी एक राष्ट्रिय संग विवाह गरिरहेको छ र एक बच्चा को जन्म दिन को लागि स्थायी रहन AKA प्राप्त गर्न को लागि (Kpali, नाइजीरिया अर्थ).
तिनका उद्देश्यहरू भेटिए र हेर्छन् कि एक बच्चा बामेडले जर्मिन अली नामको जन्म भएको थियो।
मातृभाषा: हामी उनको कथामा सीधा मुद्दामा जान्छौं भन्दा धेरै परिचय चाहिन्छ। डेली एली आमाले हृदयघाती क्षणको बारेमा बोलेको छ भने उनले आफ्नो छोरालाई छोडे ताकि उनी आफ्नो फुटबल खेलाडीको सपना पूरा गर्न सक्थे। डेनिस एली, शराब विरुद्धको बिरुद्ध लडाइँ भएको थियो र सोशल सर्भिसले आफ्ना छोराछोरीलाई हटाउनुभयो। त्यसोभए उनले डिललाई एक दम्पतीलाई सान्त्वना दिए जुन फुटबलले अब आफ्नो ग्रहण गर्ने आमाबाबुलाई बोलाउँछ।
अब म्याम-अफ-चार डेनिस भन्छन् कि उनीहरूले आफ्नो क्लब र देशको लागि 19-वर्षीय Spurs ace Dele स्कोर गर्दा प्रत्येक पटक उनीले सही निर्णय गरे।
प्रशंसकहरू कहिलेकाहीँ उनी कसरी आज कहाँ छन् भन्ने कुरा सत्यको बारेमा सुनेका छैनन्। डेनिसले भने LifeBogger:
"मलाई तिनलाई अझ राम्रो भविष्य दिनको लागि जानुपर्छ। भावनात्मक रूपमा, यो हृदयघाती थियो तर यो गर्न को लागी सही काम थियो। मेरो गम्भीर बचपनबाट मलाई गम्भीर पेय समस्या थियो। मलाई केही वर्षको लागि वोदका, बियर - केहि पनि हल्ला गरिएको थियो। सोही सेवाहरूले मेरो छिमेकीका बारे कसरी आईपुगेको बारेमा मलाई भेट्न मलाई कसरी आयो मेरो छोराछोरीलाई बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो तर मेरो बच्चाहरू कहिल्यै टाढा थिएनन्। डीलले अर्को परिवारसँग बस्न दिने निर्णय गरेको थियो। मलाई थाहा थियो कि त्यो एक पेशेवर फुटबलर बनने सपना देख्न सक्ने एक मात्र तरिका थियो। यो मेरो छोरो छोड्न गाह्रो थियो तर यसको उद्धार साबित भयो। म कसरी चीज बाहिर जान्छ को लागि धेरै आभारी हूँ। "
उहाँको आमाले यसो भने: "उनले फ्रान्स विरुद्धको गोल गरेपछि मैले मेरो सीटबाट पराजित गरे -म धेरै खुशी भएको थिएँy. मेरो छोराले यसलाई आफैले बनाएको छ। म उनको लागि धेरै खुसी छु र अति गर्व गर्दछु उहाँले सबैलाई हासिल गर्नुभएको छ। "
डेनिसले पनि छोरा लुईस, बेटियां बेकी र सबैभन्दा ठूलो बारबरालाई पनि उठाए जो सबैसँग उनको साथमा रहे। उनको अनुसार, "टाइम्स मुश्किल थियो - धेरै गाह्रो। चार चार बच्चाहरु लाई चार अलग अलग डाडों ले म संग थियो तर कुनै सम्बन्धहरु लाई समाप्त भयो। म एक आमा थियो। हामी मिलन केनेसमा तीन-शयनक्षेत्र परिषदको घरमा बसिरहेका थियौं तर यो एकदम थोरै थियो। मलाई र जब तिनी सानो हुनुहुन्थ्यो सधैं धेरै नजिक थिए। उनी मेरो सानो चिसो थियो। उनले सधैं भन्थे, 'मलाई मलाई चुलो'। मैले तिनको प्रतिभा देख्न सक्दिनँ र म उहाँलाई सकेसम्म पार्कमा लिन सक्नेछु। उहाँ एक सानो केटा हुनुहुन्थ्यो र बार्सिलोनाको लागि खेल्ने सपना देख्दा उनी सधैँ फुटबलर हुन चाहन्थे। "
उहाँले ठूलो हुनुभयो, उनीहरूको मामको समस्या बढ्दै गयो र त्यहि बेला उनी स्कूलमा समस्याको सामना गर्न सच्चा आमाको अनुपस्थितिले उहाँलाई मार्गदर्शन गर्न थाले। त्यो पनि सोशल सर्भिसलाई रिपोर्ट गरिएको थियो।
यद्यपि डेल थियो 13, डेनिस चिन्ता गर्न थाले कि उहाँ गिरोहहरु संग गिरने को बारे मा कि मिल्टन किनेस को ब्रैडवेल क्षेत्र को पलट रहे थिए जहां उनि थिए। उनले सहमति गरे कि उनी6मिलियन टाढा भाग्न सकेका थिए नजिकको पल र साथी फुटबलर हैरी हिकफोर्ड र तिनका आमाबाबु, एलन र तिनकी श्रीमती सालीसँग। डेनिस भन्छन् कि उनीहरूलाई औपचारिक रूपले अपनाईएको थिएन, उनी उनको छोराले किकग्रोको अधिक समृद्ध क्षेत्रमा हिकफर्ड्स र उनीहरूको दुई छोराछोरीसँग पूर्ण-समय बाँच्न दिईन्।
डेनिसले आफैले न्यायलाई यसो भने: "सबै बच्चाहरु डील उमेर धूम्रपान, बहकाउने र लुगा सडकमा थिए। केहि जेलमा समाप्त भयो। मलाई चिन्तित थियो कि मेरो छोरो उस हुड लाइफ द्वारा प्रलोभन हुनेछ। उहाँ कहिलेकाहीं चुनौतीपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। उनले माध्यमिक विद्यालय परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो र उनीहरूको पहिलो विद्यालयमा कहिल्यै बसेन। हिकफर्ड्स मेरो साथी थिएनन् तर उनीहरु एक सुन्दर घर थिए र मलाई थाहा थियो कि मेरो छोरालाई उनको जीवन संग उत्प्रेरित गर्न सफल भयो र सफल भयो। जब त्यो छोडिन्थ्यो, त्यहाँ आँसु थिएन, केवल राहतको भाव किनकि मलाई थाहा थियो कि त्यो सडक र बन्द हुनेछ। डीलले मलाई भने, 'म राम्रो आमा हुँ। मेरो बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्। ' उहाँले मलाई घृणा गर्नुभयो। यो कडा थियो तर उनी खुसी थिए र म खुसी हुन्थे। उसलाई टाढाको बावजूद म कहिल्यै डीलबाट अनुमान गरिएको छैन। हरेक महिना एक पटक सुत्न उहाँ मेरो स्थानमा फर्कनुहुनेछ। उहाँ उहाँका जैविक पिताको नजिक हुनुहुन्छ। केनी उहाँका गर्व गर्नुहुन्थ्यो। "
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -तीव्रता
डीलले टोटेनहेम हटस्पर्समा सामेल हुँदा यो सुरु गर्यो। The आइतबार मिरर न त नन्निस र नहिन्डिङले बढेको स्टार देखेको छ किनभने उनले टटनमहामले मिल्टन केनेन्स डनबाट हस्ताक्षर गरे। त्यो दिन सम्झँदा उहाँ सम्झनुभयो, डेनिसले आइतबार मिररलाई यसो भने:
उहाँ ठूलो आत्माहरूमा हुनुहुन्थ्यो र भन्नुभयो, 'म तिमीलाई माया गर्छु'। मलाई कुनै विचार थिएन कि अन्तिम पटक मैले उहाँलाई देख्न पाउनेछु। यसले मलाई शङ्का छोड्छ। "
डेनिस थपियो: "मैले एक मिनेट पछि बाहिर पर्ख्यो र डील बाहिर आयो जब मैले चुपचाप उसलाई भने। 'Dele ... यो मलाई ... तपाईंको आमा। उनले रोक्न सकेनन्। उहाँले मलाई हेर्नुभयो, उहाँले व्यस्त थियो र बन्द गर्यो। म आँसूमा थिएँ, यो हृदयघाती थियो। यसले मलाई हरेक हप्ता रोयो। "
रिपोर्टहरूले संकेत गर्दछ कि यो समय पछि डीलले उनको कमीजको पछाडि एली लगाएर रोकेको छ - र यो पनि रिपोर्टमा घर फर्किएको छ र आफ्नो फोन नम्बर परिवर्तन गरेको छ। विनाशकारी जोडाले पनि प्रकट गरेको छ कि उनीहरूले आफ्ना छोरालाई हेर्ने आशामा टोन्टेम म्याच र डीलको प्रशिक्षण मैदान बाहिर पर्खिरहेका छन्।
केइन्दे, मूलतः नाइजीरियाबाट बहुसंख्यक उद्यमी हो भने, उनीहरूले स्टेडियम भ्रमणमा जाने र उनीहरूलाई सम्पर्क गर्न प्रयासमा व्हाइट हार्ट लेनमा आफ्ना मिडियाहरू हेर्नको लागि पनि भुक्तान गरे।
उहाँले आइतबार मिरर भन्नुभयो: "हेर्न सकेन वा तिनीसँग बोल्न सकेन. उहाँ वर्षको साथ मेरो साथमा रहनुहुन्थ्यो र म सधै त्यहाँ त्यहाँ उहाँको लागि भावनात्मक रूपमा र आर्थिक दुवै हुनुहुन्थ्यो। मलाई थाहा छ केही मान्छे सोच्न हामी हामी उसको पैसाको लागि मात्र चाहन्छौ, तर यो सत्यबाट थप हुन सक्दैन। म मेरो आफ्नै दाहिनेमा धेरै अमीर हुँ र मलाई डीलबाट पैसा चाहिँदैन। म बस उनको लागि यहाँ हुन चाहन्छु र उनको लागि थाहा छ कि म उसलाई माया गर्दछु। म त्यहाँ उनको लागि बाल्यकाल देखि भएको छु र मेरो तस्वीरहरु लाई साबित गर्न को लागी छ। "
केहाइन्ड र डेनिस दुवै थपियो: "उहाँ हामीलाई घृणा गर्न सक्नुहुन्छ किनकि हाम्रो तलाकले हामीलाई उहाँबाट टाढा बनाउछ जुन कहिलेकाही हामीलाई हामीलाई सबैभन्दा बढी चाहिन्छ। हाम्रो हृदयमा, हामी हाम्रो छोरालाई प्रार्थना गरिरहनेछौं। हामी प्रार्थना गर्छौं कि उहाँ हाम्रो जीवनमा आउनुहुनेछ। "
Dele Alli बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: -बिग बहन बाट अपील
बारबरा डेले एलीको जेठो बहिनी हो। उनले संधै परिवार को दरार को बारे मा बताईएको छ, र भन्यो कि यो एक छ "ती सबै भन्दा कठिन चीजहरू जुनसुकै चल्नु पर्छ"।
Dele Alliको बहिनी बारबरा जॉनसनले टोटेनहम हट्सपोर स्टारसँग आग्रह गरेका छन् कि उनको निर्णयलाई उनीहरूको परिवारसँग बोल्दैनन् र उनीहरूको सम्पत्ति वा प्रसिद्धि पछि होइनन्।
उनको ठूलो बहिनी एक पटक अपील गरेको छ। लेखन गर्दै इन्स्टाग्राम, बारबरा जॉनसन ले भन्यो: "कस्तो मनपर्ने कथा, आशा छ तपाईंले यो ब्रान्ड पढ्नुहुन्छ। हामी सबैलाई सम्झन्छौं र तपाईंलाई माया गर्छु, प्रिय, हामी तपाईंको पैसा वा तपाईंको प्रसिद्धि पछि मात्र हामी चाहानुहुन्छ कि कम # डेबोट फिर्ता, जेली टाइट्स जस्तै तिमी धेरै माया गर्छौ "।
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
एक पल्ट एक पल्ट एक पल्ट, सबै सोधियो: डील एली कौन डेटिंग हो? ... यदि तपाईं पहिले देखि नै नहीं ठेगाना हो, 2017 को रूप मा Dele Alli को प्रेमिका रुबी माई हो। Ruby Mae पहिले नै पूर्ण छ मोडेल 22 को उमेर मा (2017 को रूप मा) र यद्यपि त्यो को रूप मा प्रसिद्ध को रूप मा छैन केन्डल जेनर अझै सम्म। हामी उनको बाटो मा राम्रो तरिकाले शर्त छ।
Dele Alli's Girlfriend, Ruby May।
5 '9 "सुन्दरताले डोल्से र गबबाना जस्ता अभियानहरूको लागि पनि मोडेल बनाएको छ र उनीहरूको लोकप्रियता बढ्दै गएको फोटोचोटहरू जारी राख्छ। रुबी माईको निवल मूल्य अब धेरै हुन सक्दैन, तर यसलाई सम्पर्क गर्नको लागी, यो समयको मात्र हो जब उनी मान्यता प्राप्त हुन सक्दछ। त्यो हाल यूकेमा बास मोडल्स व्यवस्थापनले प्रतिनिधित्व गरेको छ
धेरैले विश्वास गर्छन् कि उनी कारण हो किन कि डील एलीले आफ्ना आमाबाबुसँग कुनै पनि चाँडै पुनर्मिलन गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूले भन्थे, "उहाँ तिनीमाथि बलियो पकड छ"।
उसले तिनको कुरा सुन्छ र उसको परिवारको तुलनामा उसलाई प्राथमिकता दिन्छ।
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बचपन क्यारियर र उठाउनुहोस्
डीलले आफ्नो साथीहरु संग फुटबल खेलाडीहरुलाई स्थानीय खेतहरु देखि उनको बचपन देखि खेलयो। उहाँ आफ्ना शहरी कलेजमा शहर कल्ट्स भनिने शहरमा ल्याइयो। यो उनी फुटबल सिके।
डील को शुरुवात को लागी एक गंभीर फुटबल कैरियर को आयु मा 11 को रूप मा शुरू भएको थियो जब त्यो संयुक्त राज्य देखि मिल्टन केनेस मा फर्क्यो।
उनले लगभग 13 मा मिल्टन केनेन्स डनसँग प्रशिक्षण सुरु गरे। तर जब उहाँले 16 (एक पटक उनी पहिलो टोलीमा घुम्नुभयो) क्लबको लागि साइन अप गर्नुभयो, तिनका आमाबाबुले बोलाइन् भने उनीहरूलाई आमन्त्रित थिएनन् - र जब समय सकियो त्यो बढ्दो दूर भयो।
उनको ब्रेक-आउट 2014 मा आयो जब उनले मार्शल गरे र मिडफील्ड एमके डोनन्स '4-0 घरको जित जित्यो म्यान्चेस्टर युनाइटेड अगस्टमा, 2014। उनको प्रदर्शनले उनलाई खेलमा हरेक पण्डितबाट प्लेबिट प्राप्त गर्यो र स्टीवन गेरर्डसँग तुलना गर्न थाल्यो।
एली उनको बनाइयो प्रिमियर लिग पाँचौं र एक अर्ध-वर्ष सम्झौतामा £ 2015 मिलियनको शुरुआती शुल्कको लागि फरवरी5मा टोटेनहममा जानुहोस्। उनीहरूले मौसमको बाँकीको लागि एमके डनहरूमा ऋण बसाए। पहिलो टोली बनाउन को लागी केहि अपेक्षित डिलेभल गर्दा उसले स्पर्स संग पूर्व-सत्र प्रशिक्षण सुरु गर्यो। तर उनले प्रशंसकहरूलाई प्रशंसक बनाए जब उनले रियल म्याड्रिडको स्टार लूका मोररिकलाई अगस्टमा खेलको दौडान र त्यो सिजनमा लिसेस्टर सिटीको दुई हप्ताको सीजनमा गोल गरे। यसले उनलाई पहिलो-तेस्रो टोली बसाल्न मद्दत गर्यो र Spurs एक हप्ता £ 20,000 मा डबल डिलको वेदमा सेट गरिएको छ।
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -नाइजीरिया को लागी खेल को मौका बदली
फरवरी 2015 मा, यो सूचित भएको थियो कि पूर्व विम्बल्डन खेलाडी जॉन फेशनन ने नाइजीरिया को लागि खेल को लागि एली को समझाने को प्रयास गरे।
भाग्यमानी, जन। नाइजीरिया को लागि खेल्न को अवसर को बदलन को बाद, एली को इंग्लैंड को राष्ट्रीय टीम को आमंत्रित गर्यो र एस्टोनिया को अक्टोबर मा एस्टोनिया को विरुद्ध उनको पहिलो पल्ट बनाया गयो, 2015 को लागि एक देर विकल्प को रूप मा आउँदै रस बर्कले एक 2-0 मा।
निस्सन्देह, नाइश नाइजीरिया को सुपर ईगलहरुमा सामेल हुन को लागि डील को समझाने को लागि सर्वोत्तम व्यक्ति को रूप मा देखा गएको थियो। उहाँ तिनको बचपनबाट उहाँका लागि एक पिता हुनुहुन्छ।
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -मैनचेस्टर युनाइटेड अपप्लिफ्ट
उनले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई पराजित गर्दै गर्दा उनी अझै एमके डन्समा थिए।
सबैलाई उकालो लाग्नु भयो
डेली अल्लीले आफ्नो प्रिमियर लीग पहिलो पटक सिजनको उद्घाटन खेलमा मचेस्टर युनाइटेड विरुद्ध स्पर्सको रूपमा उपस्थित गरे - तर यो पहिलो मिडफिल्डरले इंग्लिश दिग्गजका विरुद्धमा उनको पहिलो अंक थिएन।
इङ्गल्याण्डमा लुइस भ्यान गलको पहिलो सीजनमा एली एक एमके डन्सन टीमको भाग थियो जुन संयुक्त राष्ट्र एनएनएक्सएक्स-एक्सएनएक्सले क्यापिटल वन कपमा शर्मिला गर्यो। एली पनि सोच्यो कि त्यो प्रदर्शनले केही महिना पछि केही महिना पछि स्पार्समा मेगा-पैसाको चाल कमायो। Dele को अनुसार;
"तपाईंले यसो भन्न सक्नु भएको थियो कि मलाई ध्यान दिईयो। हामीले एक राम्रो वर्ष एक टोलीको रूपमा पायौँ र त्यो एक स्ट्यान्ड-आउट म्याचमा थियो। यो क्लब र म को लागि एक महान प्लेटफार्म थियो, र अन्य खेलाडीहरूको केहि। यो संयुक्त राष्ट्र विरुद्ध एकदम राम्रो थियो। यो एक खेल थियो जुन हामी साँच्चै जित्नको लागि आशा गर्नुभएन, एक्लै धेरैले जित्छ। हामीले त्यो रातलाई के गर्न सक्छौं संसारलाई थाहा छ ... "
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -लिभरपूल फैन
एली वास्तवमा एक थियो लिभरपूल प्रशंसक बढ्दै गएको छ, र स्टीवन गेरार्डले उनको बचपनको नायकको रूपमा बताउँछन्।
यो लिभरपोल इको सूचना दी कि एली उनको फुटबल टीम को खोज र एक साक्षात्कार मा Merseyside को लाल साइड मा बदल्यो परिसर, उनले कोप आइकन स्टिभेन गेरार्डको विकासको लागि आफ्नो भान्दर्भिक कुरा सुनाए, उनले बताए कि लिभरपूल कप्तानले कहिलेकाहीं पहेंलो गरेकी थिइन्। यो राज्यको लागि उल्लेखनीय छ कि लिभरपूल र एमके डोनहरूले एक पटकको लागि शुल्कको लागि सहमति लिएका थिए। यो उनीहरूको वेतनको लागि वार्ता थियो जुन विफल भयो। लिभरपूलले बताए कि उनीहरूले प्रति सप्ताह 4000 पाउण्ड भन्दा बढी तिर्न सक्दैनन्।
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - खेलको आक्रामक शैलीमा
बचपनमा अनुभवी आमाबाबु बेवास्ताको विशेष कारण घाँटीको विशेष क्षमता छ जुन हामीले डील अलीको अवस्थामा देखेका छौं। उहाँ र उहाँका आमाबाबुहरू बीचको पछाडि साँच्चै वर्षौंको बीचमा गल्ती गरेको छ। यसले नकारात्मक र सकारात्मक परिणाम दुवैको कारण बनाएको छ। नकारात्मक पक्ष उनको लगातार क्रोध त्यो बज को पिच मा प्रदर्शित संग गर्न पर्छ। यसले उनको विरोधीहरूको बीचमा धेरै शोक उत्पन्न गरेको छ।
Dele को अनुसार, "म पिचमा धेरै गुस्सा लगाउन प्रयोग गरें, यसैले यदि मैले खराब टकल गरे वा थोडा आक्रामक बनाएको छु, मौरिसियो प्याकोटिनो ​​यसो भन्छ: 'त्यो एक व्यावसायिक म्याचमा रातो कार्ड हुनेछ' र मलाई सत्रबाट बाहिर लैजान्छ। त्यो शायद मलाई पिच मा एक थोडा थोपा। तर म अझै पनि क्रोधसँग खेल्छु।
कसरी डील एलीको परेशान बचपनको कारण पिचमा
डील एलीले आफ्नो सत्त्वनात्मक सम्झनाहरू आज पनि प्रतिभामा ल्याएको छ। यसले सकारात्मक पक्षलाई संकेत गर्दछ। उनीहरूको मानसिकताले विरोध टोलीलाई पराजित गर्न प्रत्येक पटक उनी सम्झँदा उनी कहाँबाट आए र उनी आफ्ना आमाबाबुले पीडा र उपेक्षाको माध्यमबाट कसरी यात्रा गरेका थिए।
आफ्नो कोच को पक्ष मा, Dele Alli उनको टीम को एक समूह को धन्यवाद गर्न को लागि। ह्यूगो ल्लोरिज भन्दा यसको कुनै अन्य व्यक्ति जसले तिनलाई टोटेनहम टोलीमा आउन पाएको भूमिका निभाएको छ।
Dele को अनुसार,
"होगलो ललोरी म टोटेनहममा एक ठूलो प्रभाव भएको छ। उहाँले मेरो आक्रामकताको बारेमा मलाई बोल्नुभएको छ र यसले मलाई धेरै सहयोग पुर्याएको छ। उनले मलाई बताए कि आक्रामक पक्ष मेरो खेलबाट बाहिर आइपुग्यो, त्यसैले म केवल आफैंमा रहन तयार छु। "
Dele Alli बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -लाइफबोगर जीवनी रेटिङ
हामी तपाईंलाई प्रस्तुत गर्छौं एलीको लाइभबगर रेटिङहरू सम्मानित स्रोतहरूको अनुपालनका रूपमा।
माइकल केई बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य